၁။ ကားပေါ်မှစီးကရက်တစ်လိပ်၏ဗို့အား - စီးကရက်မီးခြစ်အားယေဘုယျအားဖြင့်အားသွင်းကိရိယာနှင့်မျှဝေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကား၏သွင်းအားစု 12V နှင့် 24V ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုကိုရောနှော။ မရပါ၊ သို့မဟုတ်ပါကဆားကစ်အားအလွန်အကျွံဖြစ်ပေါ်စေသည်။
The voltage ofageneral family car is 12V, and most cigarette lighters are suitable. You can read the instructions carefully when choosing, or you can ask professionals.
၂။ USB output current - USB output current သုံးမျိုးရှိပါသည်။ 1A, 2A, 3A ။ မတူညီသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများတွင်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အပ်နှံထားသောလက်ရှိတန်ဖိုးများရှိသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ရောနှောပေါင်းသင်းခြင်းသည်ပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ရွေးချယ်ရာတွင် device ပေါ်ရှိ output current value ကို ဦး စွာရှင်းလင်းရမည်။ အကယ်၍ အမှတ်အသားမရှိလျှင် charger ၏သက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ရှင်းလင်းစွာသင်တောင်းဆိုရမည်။
(၄) USB port အရေအတွက်နှင့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များ - Car charger ports များကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ single-hole, double-hole နှင့် multi-hole ။ ရွေးချယ်ရာတွင်သင်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်။
လွန်ခဲ့သော:The car charger also needs maintenance